दृश्यहरू परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ?
प्रश्न दृश्यहरू परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ?
6 महिना2दिन पहिले #1315 by LTCSZ
मैले सोधेँ कि मैले भनेँ- "मैले भनेँ-" मैले भनेँ- "म तँलाई नचाहिने हो कि?" उनीहरुका लागि म3को स्थापना स्थापित गर्न चाहँदैनन् ... कुनै पनि सुझाव स्वागत हुनेछ!
स्टेभ कान्सास मा